Isqorista - Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington - Faa'iidada Medicare
Bogga ugu weyn > Qorshayaasha Medicare Advantage Plans > Diiwaangelinta
Da'da 65 jir? Bilow qorsheynta mustaqbalka daryeelka caafimaadkaaga.
KALA SOCO US
Khubarada Medicare -ka ee maxalliga ah ayaa ka jawaabi kara su'aalaha, sharxi kara ikhtiyaarrada, waxayna kaa caawin karaan is -qoritaanka.
Qaado sahan degdeg ah si aad nooga caawiso hagaajinta.
Saxiix ama Samee Isbeddello inta lagu jiro Diiwaangelinta Sannadlaha ah: Oktoobar 15 ilaa 7da Disembar
Hel daryeelka aad u baahan tahay hal qorshe. Qorshayaasha Faa'iidooyinka Medicare ee CHPW waxay bixiyaan lacag -bixinno laga bilaabo $ 0. Ikhtiyaarada dheefta waxaa ka mid ah $ 0 lacag -bixinnada booqashooyinka dhakhtarka, daawooyinka guriga lagu geeyo, oo lagu daray ilkaha, aragga, caafimaadka, iyo faa'iidooyinka jirdhiska.
Sideen Isku Qori Karaa?
Si aad u aragto haddii aad u qalanto iyo goorta aad isqorto, fadlan eeg annaga Bogga u -qalmitaanka.
Na soo wac at 1-800-944-1247 (TTY: 711). Khubaradayada Medicare ee ruqsada haysta ayaa telefoonka kaa caawin doona. Waxaan kuu joognaa 7 maalmood usbuucii, laga bilaabo 8 subaxnimo ilaa 8 fiidnimo.
Dhammaystir annaga Codsiga Talaabo-Talaabo ah. Markaad soo gudbiso arjigaaga internetka oo dhammaystiran, waxaan bilaabi doonnaa ka -baaraandegga diiwaangelintaada. Waxaad heli doontaa lambarka xaqiijinta iimayl ahaan.
Soo dejiso, daabac, oo ku soo dir foomkaaga oo dhammaystiran:
ATTN: Faa'iidada Medicare ee CHPW
2022 Foomka Isqorista - Ingiriis | Formulario de inscripción shaqsi - Isbaanish
Raadinta Foomka Isqorista 2021? Ka hel halkan English iyo Spain.
Baro fursadahaaga Medicare
Waxaan kaa caawin karnaa inaan kugu hagno habka diiwaangelinta qorshe adiga kuu shaqeeya. Khubarada Medicare ee ruqsada haysta iyo kuwa shatiga leh ayaa ka wada hadli kara baahiyahaaga, ka jawaabi doona su'aalahaaga, oo kaa caawin kara inaad isqorto.
naga soo wac at 1-800-944-1247 (TTY: 711). Waxaan kuu joognaa 7 maalmood usbuucii, laga bilaabo 8 subaxnimo ilaa 8 fiidnimo
Ballan samayso wicitaan ama kulan. Waan ku soo wici karnaa, kula kulmi karnaa goob caafimaad oo kuu dhow, ama kuu diyaarin karnaa wada sheekaysiga fiidiyaha. Hel khabiir deegaanka ah or codso ballan dib u eegis qorshe.
Talo: Waa muhiim inaad ogaato goorta aad is -qori karto iyo goorta aad beddeli karto ikhtiyaaradaada caymiska.
Haddii aad dhawaan u -qalantay caymiska Medicare adigoo buuxiyay 65, ama aad la kulantay xaalad kuu oggolaanaysa inaad iska qorto meel ka baxsan Xilliga Diiwaangelinta Sannadlaha ah, waxaad iska qori kartaa mid ka mid ah qorshayaasheena Faa'idada Medicare.
Baahidaada caafimaad way is beddeli kartaa, waxaana laga yaabaa inaad u baahato caymis dheeraad ah. Haddii aad hore uga diiwaangashanayd Qorshaha Faa'idada Medicare laakiin aad u baahan tahay inaad ku darto ama ka saarto xulashooyinka caymiska, waxaad iska qori kartaa qorshe cusub inta lagu jiro Xilliga Diiwaangelinta Sannadlaha ah. Waxay dhacdaa sanad walba laga bilaabo Oktoobar 15 ilaa Disember 7.
Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan fiiri annaga Bogga u -qalmitaanka.
Inaad ilkahaaga iyo ciridkaaga caafimaad ka dhigtid waa qayb muhiim u ah qorshahaaga daryeelka caafimaadka oo dhan. Daboolida ilkaha ayaa kujirta dhamaan qorshooyinka nadaafada sanadlaha, raajada, iyo daaweynta fluoride. Qorshooyinka xulashada waxay leeyihiin caymis dheeri ah oo loogu talagalay adeegyada kale ee aasaasiga ah iyo adeegyada waaweyn ee ilkaha.
Taariikhda Ugu Dambeysa ee Cusboonaysiinta: Sebtember 30, 2021